Ciyaaraha gobollada oo bilaabmay - BBC News Somali
Ciyaaraha gobollada oo bilaabmay
Image caption Ciyaaraha Gobollada Soomaaliya oo maanta ka furmaya Garoowe
Magaalada Garowe waxaa maanta lagu qabtay xaflad hordhac ah oo la xiriirta furitaanka tartanka kubbada cagta ee gobollada Soomaaliya kaas oo maanta gelinka dambe ka furmi doona magaalada Garowe ayna ka qaybgalayaan 15 gobol. Xafladaas oo ay ka qabgaleen masuuliyiin kala duwan, ciyaartoyda gobollada iyo marti sharaf fara badan waxaa warbixintan ka soo diray weriyaha BBCda Axmed M.Cali.
Xafladdan hordhaca ah waxaa si wayn uga muuqday ciyaartoyda dhallinyarada ah ee gobollada kuwaas oo watay dharkoodii ciyaaraha oo midabbo kala duwan leh waxaa kale oo xafladdan hareeyay madaxda kala duwan ee sportiga qaybihiisa kala duwan haddii ay yihiin kuwa xiriirka kubbada cagta iyo madax kale oo ka socotay guddiga olombikada Soomaaliyed.
Duqa magaalada Garowe C/casis Nuur Cilmi ayaa si diirran caasimadda Puntland ugu soo dhoweyay dhammaan ergooyinkii gobollada iyo madaxda kale ee ka timi degaannada kala duwan ee Soomaaliya ee maanta ka qaybgalay xafladda hordhaca looga dhigay furitaanka ciyaaraha gobollada.
Masuuliyiinta xiriirka kubada cagta ee Soomaalidu waxay tilmaameen in qabanqaabada tartankan 18aad ee ciyaaraha gobollada waxaa laga soo maray hawlo kala duwan oo waqti dheer qaatay sida ay sheegeen waxana maanta lagu tilmaamay maalin taariikhi ah oo lagu xusuusan doono qabashada ciyaarahii gobollada Soomaaliya muddo 22 sano ka dib sida uu sheegay xogyaha guud ee xirka kubbada cagta Soomaaliya C/qani Sicid Carab
Guddoomiyaha xiriirka kubbada cagta Siciid Maxud Nuur Mugambe oo isagana ka mid ahaa dadkii kaalinta wayn ka qaatay qabanqaabada tartankan ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid taariikhi ah oo suuragelin doonta is-dhexgalka dhallinyaro Soomaaliyeed oo aan weligood is arag ama aan kulmin fagaare noocaan oo kale ah.
Intiii ay socotay xafladda hordhaca ee tartanka kubbada cagta ee gobollada Soomaaliya waxaa si wayn loogu bogaadiyay maamulka Puntland oo isgu martigeliyay tartankan taas oo lagu tilmaamay tallaabo macna wayn ugu fadhida Soomaalida oo dhan.
Wasiirka dhallinyarada iyo sportiga Puntland Max'ed Nuur Cagwayn oo ka mid ahaa masuuliyiintii ka qaybgashay xafladaas ayaa tilmaamay ahmiyadda ay leeyihiin ciyaaraha gobollada isagoo dhinaca kalana aad ugu dheeraaday arrimaha la xiriira xagga nabadgelayda iyo in dadka faraha badan ee magaalada isugu yimi ay arrintaas gacan ka gaystaan.
Maanta gelinka dambe ayaa la filayaa in ciyaarta ugu horraysa ay ka billaabato garoonka Mire Awaare Stadium ee magaalada Garowe kaas oo ay ku kulmi doonaan sida qorshuhu yahay labada gobo lee Nugaal iyo Shabeellada hoose.
Hase ahaatee ciyaarta ka hor waxaa ku talagalku yahay xaflad ballaaran oo isugu jirta mahrajaan ay ka qaybgalayaan ardayda dugsiyada ee magaalada Garowe iyo ciyaaro kala duwan sida ay BBCda u sheegeen masuuliyiinta guddiga qabanqaabada tartanka gobolada.